ပြောင်းရွှေ့လာသောလူထိန်းသိမ်းရေး: အမေရိကန်နယ်စပ်တလျှောက်တွင်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထား | USAHello
သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုမက္ကဆီကိုနယ်စပ်၏တစ်ဖက်အပေါ် Are နှင့်သင်အကူအညီလို? သငျသညျအမိုးအကာရှာဖွေနေကြသည်, ဥပဒေရေးရာပံ့ပိုးမှု, အစာ, နှင့်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ဟုဆိုကာကူညီ? သငျသညျလူဝင်မှုထိန်းသိမ်းရေး၌ရှိကြ၏? ဒီနေရာတွင်ကကူညီသို့မဟုတ်အကြံပေးစေခြင်းငှါအချို့အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များမှာ.
သငျသညျအမေရိကအလယ်ပိုင်းမှတဆင့်ခရီးသွားလာနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားနေတယ်ဆိုရင်, သင်တိုင်းပြည်ရန်သင့်အား entry ကိုခွင့်ပြုသောစာရွက်စာတမ်းများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်သင်လူဝင်မှုထိန်းသိမ်းရေးထားခံရအန္တာရာယ်ကိုကိုယ်သိရဖို့လိုအပ်. ဒါဟာအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာမသာပြု, ဒါပေမယ့်မက္ကဆီကိုရှိ, ဂွာတီမာလာ, နဲ့ El Salvador.
အဆိုပါနယ်စပ်ကောင်းကင်တမန်က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်, သငျသညျဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အကူအညီပူဇော်ကြောင်းမက္ကဆီကိုအတွက်အုပ်စုများအတွက်အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. တချို့ကကမ်းလှမ်းမှုကိုအစားအစာ, ရေ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီ, နှင့်အမိုးအကာ. အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည် Grupo Beta ကို, ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသော, မက္ကစီကိုတစ်လျှောက်လုံးနေရာများစွာရှိပါတယ်.
ရွှေ့ပြောင်းအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအဘို့အကက်သလစ်အဝန်းန်ဆောင်မှုများ, Hospitality ရေးစင်တာ
ကက်သလစ်န်ဆောင်မှုများ, Hospitality ရေးစင်တာကြွင်းခရီးသွားများအတွက်လုံခြုံရာအရပျပေးသည်, rehydrate, စားသည်, နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးတို့အဘို့ဂရုစိုက်. သူတို့ဟာအဝတ်တစ်ပြောင်းလဲမှုများကို, တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ, တက်ကိုလျှော်ရန်နှင့်အခွင့်အလမ်း. စေတနာ့ဝန်ထမ်းခရီးသွားတွေကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏သူတို့ကိုမိသားစုဝင်များဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်ဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီစဉ်ကူညီ. သူတို့စွန့်ခွာမတိုင်မီအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုနှင့်ပြည့်စုံခရီးသွားအိတ်လက်ခံရရှိ. သူတို့ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်နေ့ကိုထွက်သွားနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူများသည်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏အိမ်တွင်သို့မဟုတ် CASA Alitas မှာညဉ့်ကိုလွန်စေခြင်းငှါ, စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ကက်သလစ်အဝန်းန်ဆောင်မှုများဝန်ထမ်းတွေတာက်ဆန်အတွက်သေးငယ်တဲ့အိမ်က.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ရောက်ရှိလာသော
သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစု / မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုဖို့စီစဉ်သို့မဟုတ်အဲဒီမှာပြီးသားဖြစ်ကြောင်းနေတယ်ဆိုရင်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရန်သင့်အားလမ်းပြနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်ဟာသွားလာရန်အရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်.
ကျနော်တို့စည်းလုံးညီညွတ်နေကြ: Project မှခိုလှုံခွင့် / ခိုလှုံခွင့်စီမံကိန်း
ကျနော်တို့စည်းလုံးညီညွတ်နေကြ (“ကျနော်တို့ယူနိုက်တက် Are”) Ciudad ရေ့စ်မှာမက္ကဆီကန်နယ်စပ်အပေါ်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာကိုယ်စားပြုမှုကွန်ရက်. တိုင်းပြည်အနှံ့ကနေစတေနာ့ဝနျထမျးဥပဒေရေးရာလမ်းညွှန်မှုနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုပေး. အဆိုပါစီမံကိန်းကြောင့်ပြေးနေသည် အယ်လ် Otro Lado နှင့် Clinical.
အဆိုပါ Florence ပြောင်းရွှေ့လာသောလူအခွင့်အရေးစီမံကိန်းသင်သည်သင်၏အမှုကိုခုခံကာကွယ်ကူညီရန်စာရွက်စာတမ်းများစုဆောင်းထားသည်. ပစ္စည်းများယေဘုယျအရင်းအမြစ်များကိုဖြစ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများပါဝင်သည်, သငျသညျထိန်းသိမ်းရေးကနေဖြန့်ချိနေကြပါတယ်ပြီးနောက်များအတွက်, တစ်ဦးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားသူကြီးများ၏ရှေ့မှောက်၌သင်၏အပြည်နှင်ဒဏ်တိုက်ခိုက်နေ, နှင့်သင့်ကိစ္စတွင်ဆွဲဆောင်.
သင်သည်သင်၏ခိုလှုံခွင့်ကိစ္စတွင်ကူညီပံ့ပိုးရန်ကိုသုံးနိုင်သည်စာရွက်စာတမ်းများအများအပြားအပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ်. ဒါကဖြစ်ပါသည် သင်သည်သင်၏ခိုလှုံခွင့်ကိစ္စများတွင်သုံးနိုငျစာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သက်. တင်ပြချက် သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို.
USA တွင်ခိုလှုံခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်, သင်သက်သေပြနိုင်ဖို့သက်သေအထောက်အထားရှိပါကသင်သည်ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုသို့မဟုတ်စော်ကားခဲ့ကြသည်သင်၏အမှုကိုကူညီပေးပါ, နှင့်သင့်အစိုးရသင်သည်ကာကွယ်ပေးမပြုခဲ့ကြောင်း. သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်နိုင်စေဖို့သင့်ရဲ့နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ကိစ္စတွင်အနိုင်ရဖို့ရှိသည်ပိုကောင်းခွင့်အလမ်းရှိသည်ပိုမိုသက်သေအထောက်အထား.
အစဉ်အမြဲအမှန်တရားပြောပြရန်သေချာပါစေ, မဟုတ်ရင်သင်ချက်ချင်းသင့်အမှုငြင်းပယ်နိုင်. သင်တို့သည်လည်းအသေးစိတ်အကြောင်းကိုအလွန်တိကျတဲ့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဖြစ်ပျက်အတိအကျဘာကိုသတိရအချိန်ဖြုန်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, အတိအကျရက်စွဲပေါ်တွင်. သင်တစ်ဦးအမှားလုပ်လိုလျှင်, အစိုးရကသင်လဲလျောင်းနေကြသည်ထင်စေခြင်းငှါ.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမက္ကဆီကိုနယ်စပ်- သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသိပါ, အလုပ်သမားရေးရာဦးစီးဌာန
အဘိဓါန် Arabic, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ဆိုမာလီ, ဒူ, အဘိဓါန် Mandarin-, ပြင်သစ်, ဟိန်ဒီ, နှင့် Punjabo ဘာသာစကားများ. LGBTQ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်လက်စွဲ, အရွယ်ရောက်သူ, နှင့်မပါဘဲသားသမီးများ.
ဤသည် packet ကိုအခွင့်အရေးခြုံငုံသုံးသပ်ကာလူဝင်မှုများကိုရည်ရွယ် (ရှိမရှိကဒီမှာတရားဝင်သို့မဟုတ်မ) တစ်ဦးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတဦးအားဖြင့်ရင်ဆိုင်လျှင်သို့မဟုတ်ပင်နိုင်ငံသားလေ့ကျင့်ခန်းစခွေငျးငှါ.
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောင်းရွှေ့လာသောလူ Justice Center ကိုဥပဒေရေးရာအကြံပေးများကိုဥပဒေရေးရာရည်ညွှန်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်. သငျသညျက၎င်း၏သေဆုံးသူအခမဲ့အရေအတွက်ကိုမှာအမျိုးသားပြောင်းရွှေ့လာသောလူ Justice Center ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်: (312) 263-0901.
ဤစာရွက်စာတမ်းသူတို့လိင်တူချစ်သူကြောင့်သူတို့ရဲ့နေအိမ်နိုင်ငံများသို့ပြန်သွားဖို့ကြောက်လန့်နေသောလူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုးသို့မဟုတ်လိင် (လိင်တူချစ်သူ) နှင့် / သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ HIV အခြေအနေကိုကြောင့်. သင်သင့်အိမ်နိုင်ငံသို့ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပါကသငျသညျထိခိုကျသို့မဟုတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရလိမျ့မညျကိုကွောကျရှံ့လျှင်သင်ပြည်နှင်ဒဏ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးရှိစေခြင်းငှါ. ဤသည်ကို manual လမ်းညွှန်နှင့်သယံဇာတဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဥပဒေအကြံပေးတစ်ဦးအစားထိုးအဖြစ်အစေခံရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်. သင်တစ်ဦးရှေ့နေရရှိရန်ကြိုးစားသင့်တယ်.
သင်၌ဤအချက်အလက်ဖတ်ရှုနိုင်သည် စပိန်, ပြင်သစ်, နှင့် အဘိဓါန် Arabic.
ဤရွေ့ကားလက်စွဲအင်္ဂလိပ်လိုအခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေး, စပိန်. ပြင်သစ်, လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားစွဲဆိုမှုစဉ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့အမိမြေလုံခြုံရေးဌာနတို့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေကြလျှင်အမေရိကန်ဥပဒေအရရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတို့၏အခွင့်အရေးကိုတစ်ဦးနားလည်မှုပေးစေခြင်းငှါဗေီနှင့်အခြားဘာသာစကားများ.
ဖယ်ရှားရေးတရားစွဲဆိုမှု၌နေသော Pro ကို-Se ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံမှုအတွက်အရင်းအမြစ်များ
အဆိုပါ T ကဗီဇာလူကုန်ကူးမှု၏သားကောင်များမှထုတ်ပေးသောဗီဇာဖြစ်ပါတယ်, ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံး. တရားမဝင်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်နှင့်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်မမှန်သောတောင်းဆိုမှုများအပေါ်သူတို့ရဲ့အလိုတော်ဆန့်ကျင်သည် USA သို့မှောင်ခိုသူများစွာသောလူရှိပါတယ်. ဤသူသည်သင်တို့မှဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, သငျသညျဗီဇာဤအမျိုးအစားများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
သငျသညျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖြစ်ပျက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုသားကောင်ခဲ့ကြသည်? သငျသညျဥပဒေစိုးမိုးရေးကူညီပေးခဲ့? သင်ပေါင်း နာကျင်စေ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရာဇဝတ်မှုများ၏? တစ်ဦးကဦး-ဗီဇာအချို့ပြစ်မှု၏သားကောင်များပေးနိုင်ပါတယ်, အခြို့သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသူကို, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်.
USA တွင်ခိုလှုံခွင့်: အသစ်က USCIS ဖြစ်စဉ်ကို
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသတင်းအချက်အလက် - သတင်းနောက်ဆုံးသတင်းများ
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ Clinical, အဆိုပါ ပြောင်းရွှေ့လာသောလူဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်စင်တာ (ILRC), အဆိုပါ အမျိုးသားပြောင်းရွှေ့လာသောလူ Justice Center ကို (NIJC), နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.